LG dia manolotra New K Series ao amin'ny CES 2016 | Androidsis
Manuel Ramirez | | LG, About us
LG, toy ny hafa toa an'i Samsung, dia mahatsapa izany Tsy izy rehetra intsony no mpampiasa mankafy ny avo lenta ary amin'ny iray eo anelanelan'ny € 150-300 dia afa-po tanteraka izy ireo manana andian-tsarimihetsika fototra ahafahan'izy ireo manatanteraka ny lahasa nomerika isan'andro. Ireo telefaona misy efijery izay manara-penitra, fakan-tsary maka sary tsara nefa tsy mandeha lavitra intsony ary inona no mety hitranga raha afaka mifamadika eo amin'ireo fampiharana samihafa noho ny RAM sy CPU iray izay manao ilay asa mihoatra ny zavatra rehetra.
Noho io antony io dia mandroso andian-telefaona K vaovao ilay goavambe teknolojia Koreana Tatsimo izay mitady ny tanjona amin'ny faralahy ary amin'ny besinimaro izay efa leo ny avo lenta, saingy izay te hanana famolavolana premium mihoatra ny endri-javatra miavaka iray hafa. Ny telefaona roa nitokana ity andiany ity dia ny K10 sy ny K7. Ny tsirairay dia handefa karazany roa, ny iray miaraka amin'ny LTE ary ny iray hafa misy 3G misy famaritana ambany kokoa. Ireo finday ireo dia hanana ny volavolany noforonina hiaraka amin'ireo smartphone sinoa rehetra izay avy amin'i Xiaomi na Huawei izay, ankoatry ny fananana fandanjalanjana lehibe amin'ny resaka fitaovana sy ny vidiny, dia manana endrika tsara. Famaranana sy kalitao.
1 Andiana telefaona K vaovao
2 Mikasika ny fepetra arahana
2.1 Famaritana K10
2.2 Famaritana K7
Andiana telefaona K vaovao
Este Fiteny «Glossy Pebble» mahavita manolotra ireo finday finday finday ireo fijery misy endrika miolakolaka kokoa ary fikitika maoderina kokoa mifantoka amin'ny tanora mpihaino. Tanjona iray hafa tanterahina ny mitondra ny bokotra rehetra any aoriana fa tsy ireo lafiny izay ahitantsika azy ireo amin'ny sisa amin'ny finday avo lenta avy amin'ireo mpamokatra hafa ankoatr'izay maningana. Izy io koa dia mety amin'ny telefaona LG mba hahafahany mampiasa ny verany 2.5D Arc vaovao ho an'ny fomba fanamiana kokoa.
Ny ao ambadiky ny smartphone vaovao dia misy lamina mifamatotra ho an'ny fitomboan'ny fihazonana ary mampihena ny riandrano mety hitranga. Na ny K10 na ny K7 dia samy hifantoka amin'ny famoronana atiny media, tahaka ny amin'ny LG avo lenta. Midika izany fa ny fisehoan'ny "Gesture Shot" izay mamela ny fanaovana selfie amin'ny fanokafana tanteraka ny tanana ary avy eo hanao fihetsika totohondry, mba tsy handany fotoana ny mpampiasa haka iray amin'ireo karazana sary fampiasa indrindra.
Mikasika ny fepetra arahana
Ny K10 no finday avo lenta avo indrindra amin'ny singa ao anatiny. Ny kinova LTE an'ny fitaovana dia hampiavaka azy efijery 5,3 santimetatra, Fakan-tsary 13 MP aoriana, fakan-tsary 8 MP ho an'ireo selfie, RAM 2 GB, fitehirizana anatiny 16 GB, bateria 2.300 mAh ary mirefy 146,6 x 74,8 x 8,8 mm. Ity K10 ity dia ho tonga fotsy, indigo ary volamena, na dia tsy ho araka ny andrasana aza ny Android 5.1 fa tsy ny Android 6.0 Marshmallow.
Efijery HD 5,3 inch
LTE puce: 1.2 GHz na 1.3GHz quad-core / 1.14GHz octa-core 3G: 1.3GHz quad-core
Fakan-tsary: ​​LTE: 13 MP aoriana / 8MP na 5MP aloha 3G: 8MP aoriana / 8MP na 5MP eo aloha
Fahatsiarovana RAM: 2GB / 1.5GB / 1GB
Fahatsiarovana anatiny: 16GB / 8GB
Refy: 146,6 x 74,8 x 8,8 mm
Tambajotra: LTE / 3G
Loko: fotsy, indigo ary volamena
Ny hafa: 2.5D Arc Glass / Gesture Shot / Tap and Shot / Gesture Interval Shot
Ny K7 koa dia hanana karazany roa, kinova LTE ary kinova 3G. Ny lehibe indrindra amin'ny specs dia ny LTE izay hanana efijery 5-inch, Fakan-tsary 8 MP aoriana ary fakan-tsary 5 MP eo aloha, RAM misy 1.5GB, fitehirizana anatiny 8 GB, bateria 2.125 143,6 mAh ary refy mankany amin'ny 72,5 x 8,9 x 3 mm. Ny variant LTE dia havoaka amin'ny loko efa nofaritana ho "Titan", fa ny kinova 5.1G dia hanana karazany telo toy ny fotsy, mainty ary volamena. Ho hita eto ihany koa ny Android XNUMX.
Fampisehoana 5-inch FWVGA ao anaty sela Touch (LTE) / On-cell Touch (3G)
Sela: LTE: 1.1GHz quad-core 3G: 1.3GHz quad-core
Fakan-tsary 8MP na 5MP aoriana / 5MP eo aloha
Fahatsiarovana RAM: 1.5GB / 1GB
16GB / 8GB fitadidiana anatiny
Bateria 2.125 mAh
Size: LTE: 143,6 x 72,5 x 8,9mm 3G: 143,6 x 72,5 x 9,05mm
LTE Colours: Titan 3G: White / Black / Gold
Ny hafa: 2.5D Arc Glass / Gesture Shot / Gesture Interval Shot / Tap ary Shot
Tsy fantatray ny vidiny ary misy, saingy azo antoka fa hanana vaovao bebe kokoa isika amin'ny andro ho avy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » LG » LG dia nanambara ny finday avo lenta K andiany amin'ny CES 2016
Fampiharana sakafo hariva misolelaka rantsantanana; Androany, mahandro miaraka amin'i Sara Lite